Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mampitandrina ny manampahefana misahana ny fampandrosoana fizahan-tany any Sri Lanka, manampahefana amerikana ary anglisy manoloana ny fanafihana fampihorohoroana
Tao amin'ny fanambarana iray navoakan'ny Fahefana Fampandrosoana ny fizahan-tany ao Sri Lanka dia namporisika ireo hotely any Sri Lanka handray fepetra faran'izay lehibe hanamafisana ny filaminana satria ny Hotely no iray amin'ireo lasibatra lehibe. Ampianaro izahay hampiely ny teny ary aza adino ny manampy ny mpizahatany izay any Sri Lanka ankehitriny. ”
Ny indostrian'ny fitsangatsanganana any Sri Lanka dia miomana amin'ny fiantraikan'ilay fanafihana mahatsiravina tamin'ny Alahadin'ny Paska tao Colombo renivohi-pirenena sy Negombo, misy ny seranam-piaramanidina.
Nahazo mpizahatany 2.1 tapitrisa i Sri Lanka tamin'ny taona 2017 ary nametraka tanjona ny hampiakatra avo roa heny an'io isa io amin'ity taona ity. Ny visa malalaka ho an'ny mpitsidika avy amin'ny firenena 30 ao Etazonia, UK, EU ary Thailand dia ao anatin'ity paikady ity.
Mangina i Sri Lanka ankehitriny. Ny curfew ary mikatona daholo ny arabe.
Ny masoivoho amerikana dia nampiakatra ny haavon'ny torohevitra momba ny dia ho an'i Sri Lanka ho amin'ny ambaratonga 2: Nampitandrina ireo vondrona mpampihorohoro ny masoivoho mba hanohy hanao tetika mety hisian'ny fanafihana any Sri Lanka. Ny mpampihorohoro dia mety hanafika tsy misy fampandrenesana kely na tsy misy, mikendry ny toerana fizahan-tany, tobin'ny fitaterana, tsena / toeram-pivarotana, fotodrafitrasan'ny governemanta eo an-toerana, trano fandraisam-bahiny, klioba, trano fisakafoanana, toeram-pivavahana, zaridaina, hetsika ara-panatanjahantena sy kolontsaina lehibe, andrim-panabeazana, seranam-piaramanidina, sns. faritra ho an'ny daholobe.
Ny White House dia namoaka fanambarana, fa melohin'i Etazonia amin'ny fomba mahery vaika ny fanafihana mpampihorohoro mahery vaika any Sri Lanka izay namoizana ain'olona sarobidy tokoa tamin'ity alahady paska ity. Ny fiaraha-miory aminay dia avy amin'ny fianakavian'ireo 200 mahery maty ary an-jatony maro hafa naratra. Mijoro miaraka amin'ny governemanta Sri Lankan sy ny olona isika rehefa mitondra ny fitsarana ireo mpanao izany asa ratsy sy tsy misy dikany izany.
Nandritra izany fotoana izany dia nisambotra olona 13 voalaza fa ahiahiana i Sri Lanka. Nisy ny fanafihana iray hafa natao teny amin'ny seranam-piaramanidina. Olona 215, anisan'izany ireo mpizahatany vahiny no namoy ny ainy, maherin'ny 500 no naratra tamina andiana fanafihana nokasaina sy natao tamin'ny alahady paska.
Ny Departemantan'ny raharaham-bahiny UK dia miteny amin'ny olom-pirenena anglisy:
Tamin'ny 21 aprily 2019 dia nisy baomba nanafika fiangonana telo sy hotely telo tany Sri Lanka, afovoan'i Colombo; any amin'ny faritra avaratr'i Colombo Kochchikade, ary any Negombo manodidina ny roapolo kilaometatra avaratry Colombo; ary any atsinanan'ny firenena ao Batticaloa. Nisy maty marobe. Raha any Sri Lanka ianao ary tsy manana ahiahy ianao, dia manoro hevitra anao izahay hifandray amin'ny fianakaviana sy ny namana hampahafantatra azy ireo fa voaro ianao.
Raha any Sri Lanka ianao ary voakasik'izany fanafihana izany dia miantso ny British High Commission any Colombo: +94 11 5390639, ary safidio ny safidy maika raha hifandray amin'ny iray amin'ireo mpiasan'ny consular anay ianao. Raha any Angletera ianao ary manahy momba ny namana na fianakaviana britanika any Sri Lanka tratry ny trangan-javatra nitranga, dia miantso ny laharan-tariby FCO: 020 7008 1500 ary araho ireo dingana ireo.
Nampiakarina ny filaminana manerana ny nosy ary misy ny tatitra fa misy ny hetsika fiarovana. raha any Sri Lanka ianao dia araho azafady ny torohevitry ny manampahefana misahana ny fiarovana eo an-toerana, ny mpiambina ny hotely na ny orinasanao mpizahatany. Miasa ny seranam-piaramanidina, saingy miaraka amin'ny fiakarana fiarovana. Misy ny seranam-piaramanidina sasany manoro hevitra ny mpandeha mba ho tonga aloha hisoratra anarana, manoloana ny fitomboan'ny fitiliana ny fiarovana.
Nanambara ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny firenena ny manampahefana sankilankankan. Tokony hametra ny hetsika ianao mandra-pahatongotra izany, manaraka ny torolalan'ny tompon'andraikitra eo an-toerana sy ny mpandraharahan'ny hotely / fizahanao.
Ny manampahefana srilankey dia nanamafy fa, raha mila sidina avy any amin'ny seranam-piara-manidina Colombo ianao, dia afaka mandeha mankany amin'ny seranam-piaramanidina raha toa ka manana pasipaoro sy tapakila manan-kery amin'ny dia ianao amin'io andro io. Nanamafy koa izy ireo fa efa nalamina ny fandaminana ny mpandeha tonga.